Vanopa Rubatsiro Vozeya Nyaya yeZimbabwe kuNorway
Chivabvu 28, 2010
Nyika dzinopa rubatsiro dzichitungamirwa neAmerica neBritain, dziri kutarisirwa kusangana muNorway neChipiri kuti dzizeye nyaya yekuti dzingabatsire seiZimbabwe.
Zvichataurwa pamusangano uyu zvinosanganisira mamiriro akaita hurumende yemubatanidzwa, chikwereti cheZimbabwe, uye mirawo yekuendesa hupfumi kuvatema.
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vanoti vane chivimbo chekuti musangano uyu uchauya nemari yekubatsira Zimbabwe. VaBiti vanoti vatumira gwaro kuburikidza nemuzinda weNorway muZimbabwe, rekukurudzira nyika idzi kuti dzibatsire Zimbabwe nemari.
Asi vamwe vamiriri vedzimwe nyika idzi vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nezviri kuitwa muhurumende yemubatanidzwa, nekudaro vachaenderera mberi nekupa rubatsiro rwechikafu nemishonga, kwete kupa hurumende mari yairi kutsvaga nemaziso matsvuku.
Vamwe vanopa rubatsiro vanoti vachapa mari mapazi ane makurukota asingaite zvehuori. Asi Zanu-PF inoti uku kuda kupatsanura hurumende.
Dzimwe nyika dzichapinda mumusangano uyu iJapan, Germany, France, Sweden, Holland, Norway, Canada neAutsralia. VaCharles Mangongera vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika. VaMangongera vanoti havaoni Zimbabwe ichipihwa mari nekuti hapana chavandudzwa muhurumende yemubatanidzwa.